Lahatsoratr'i Gary Vaynerchuk Inc.
Makà ora iray, jereo ity horonantsary ity
Alahady, May 27, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Tsy azoko antoka fa naheno kabary iray izay nifanaraka akaiky kokoa amin'ny fomba fiasanay amin'ny mpanjifantsika izahay. Toy ny maro amin'ireo olona hajaiko eo amin'ny sehatry ny varotra an-tserasera, Gary Vaynerchuk Tsy tokony hanapoaka setroka amin'ny teôria… nampihatra tamim-pahavitrihana izy, nosedraina ary nampifanaraka tsara ny fomba fiasa amin'ny marketing an-tserasera - ary nahomby.
Ity dia resaka kabary fomba iray (fampitandremana: fanaratsiana sasany ampiasaina amin'ny fanamafisana) izay milaza mazava tsara ny fiovan'ny izao tontolo izao sy ny antony itiavanao ny asa ankehitriny amin'ny maha-fikambanana anao hanova ny fomba fivarotanao ny vokatrao sy ny serivisinao. Fotoana kely fotsiny alohan'ny hanaovana ny fifaninanana ary tsy manana mpihaino hohenoina ianao. Tsy misy minitra iray akory hialana amin'ity horonantsary ity - na ny Q&A aza dia mahavariana ary hampahiratra ny masonao. Jereo izany!
Karakarao ny mpanjifanao ary tazomy. Ny paikadin'ny fahazoana vola dia ho lasa sarotra kokoa, ary hahatonga azy ireo ho lafo kokoa. Tsy afaka mifaninana amin'ny orinasa manana mpanjifa faly be ianao izay manandratra ny fahalehibiazany isan'andro. Tongava orinasa miaraka amina orinasa tsy mampino ianao ary vao avy nampitombo ny varotrao mihoatra noho izay omen'ny dokambarotra rehetra.
Lahatsary: ​​Tolom-piavotan'ny haino aman-jery sosialy - The Parody
B2B - LinkedIn sa Facebook?